Filoham-pirenena Trump hametraka lalàna miaramila any Etazonia?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Filoham-pirenena Trump hametraka lalàna miaramila any Etazonia?
Cathryn Pikett avy any Kansas dia maniry ny hanambaran'ny filoha Donald Trump ny lalàna miaramila any Etazonia, mba hahafahany mijanona amin'ny fahefana. Toa nifanaraka tamin'i Cathryn ny filoha Trump.
Cathryn dia nandefa tao amin'ny Twitter-ny androany: Andriamatoa Filoham-pirenena mampiasa ny lalàna miaramila, na inona na inona tokony hataonao. Izahay Tia Tanindrazana dia vonona hanao izay tokony hataontsika mba hiarovana ny ho avin'ny zanatsika. Azafady, azafady !!!!!! Misaotra anao tamin'ny zavatra nataonao rehetra. Andriamanitra anie hitahy antsika USA.
Vao niditra tao amin'ny Twitter i Cathryn Pikett omaly ary manaraka ny filoham-pirenena sy ny mpanohana toa an'i Rep. Jim Jordan avy any Ohio, izay nandefa ny Twitter-ny ihany androanyAtaovy afaka indray i Amerika. ”
Tian'i Cathryn ny filoha hanambara ny lalàna miaramila any Etazonia, afaka mijanona eo amin'ny fitondrana i Donald Trump. Toa nanaiky izany ny filoha Donald Trump.
Ny zoma lasa teo, ny sekretera mpiaro an'i Chris Miller dia nandidy ny fijanonan'ny Pentagon hiara-hiasa amin'ny fifandimbiasan'ny filoha voafidy Biden, tompon'andraikitra manaitra ny sampana fiarovana, hoy ny tompon'andraikitra ambony amin'ny fitantanan-draharaha amin'ny fampahalalam-baovao Axios.
NANASA COUPY IREO. Tsy maninona izay nolavin'i Trump na nofihininy. Omaly alina izy, Flynn, Giuliani, ary Powell dia nihaona tao amin'ny Biraon'ny Oval mba hanao tetika fikomiana ara-tafika hanoherana ny governemanta.
Tsy misy safidy: ny POTUS-Elect dia tsy maintsy mampitandrina ireo mpiray tsikombakomba fa henjehina izy ireo pic.twitter.com/IebURl3Irk
- Keith Olbermann (@KeithOlbermann) Desambra 20, 2020
Ny zoma ihany koa ary nivoaka ny fonja taorian'ny famotsoran-keloka nataon'ny filoha Trump, ny mpanolotsaina teo aloha nasionaly Michael Flynn dia nasaina hivory tao amin'ny White House, izay voalaza fa nanontany azy momba ny fangatahana lalàna miaramila i Trump.
Nandritra io fivorian'ny White House io tamin'ny zoma, ny filoha Donald Trump dia nanosika ny hevitra hanome anarana ny mpisolovava mpandala ny nentin-drazana Sidney Powell ho mpanolotsaina manokana hanadihady ny faharesen'ny filoha voafidy Joe Biden, araka ny tatitry ny media maro.
Araka ny Politico, nihanafana ny adihevitra ary nampiaka-peo.
Tamin'ny fivorian'ny Biraon'ny Oval, izay notaterin'ny The New York Times voalohany, Trump dia niresaka tamin'ny mpanolotsainy ny mety hanendrena an'i Powell hanadihady momba ny fisolokiana amin'ny fifidianana ary mety hisambotra milina fandatsaham-bato izay nolazain'i Trump fa namboarina taminy.
Ny ankamaroan'ireo mpanolotsaina tamin'ny fivorian'ny White House, izay nahitana an'i Powell, dia nanohitra ireo hevitra ireo. Araka ny New York Times. Anisan'ireo nanohitra ny soso-kevitr'i Powell ho mpanolotsaina manokana ny mpisolovava an'i Trump Rudy Giuliani, izay niditra an-tariby. Giuliani dia mararin'ny Coronavirus.
USA Today namoaka famintinana ora lasa izay.
Lalàna miaramila any Etazonia dia manondro ireo fotoana teo amin'ny tantaran'ny Etazonia izay nananganana faritra, fanjakana, tanàna, na Etazonia iray manontolo teo ambany fifehezan'ny tafika iray. Amin'ny sehatra nasionaly, ny filoham-pirenena amerikana sy ny kongresy amerikana dia samy manana fahefana hametraka lalàna miaramila satria samy afaka miandraikitra ny milisy izy roa.  Isaky ny fanjakana dia manana zo hametraka lalàna miaramila ny fanjakan'ny fanjakana ao anatin'ny faritry ny fanjakana.  Any Etazonia, ny lalàna miaramila dia nampiasaina tamin'ny toe-javatra maromaro, toy ny New Orleans nandritra ny ady tany New Orleans; taorian'ny loza lehibe, toa ny Great Chicago Fire tamin'ny 1871, ny horohorontany tany San Francisco tamin'ny 1906, na nandritra ny korontana, toy ny rotaka tamin'ny hazakazaka Omaha tamin'ny 1919 na ny rotaka tamin'ny Lexington tamin'ny 1920; ny mpitondra eo an-toerana dia nanambara ny lalàna miaramila mba hiarovany tena amin'ny herisetra ataon'ny vahoaka, toa an'i Nauvoo, Illinois, nandritra ny Ady Mormona tao Illinois, na i Utah nandritra ny Ady tao Utah; na ho setrin'ny fikorontanana mifandraika amin'ny fihetsiketsehana sy korontana, toy ny fitokonana amoron-dranomasina tamin'ny 1934 West Coast, tany Hawaii taorian'ny fanafihan'ny Japoney an'i Pearl Harbor, ary nandritra ny Hetsika mpiaro ny zon'olombelona ho valin'ny fikomiana Cambridge tamin'ny 1963.
Ny foto-kevitry ny lalàna miaramila any Etazonia dia mifamatotra akaiky amin'ny zon'ny habeas corpus, izay, raha ny tena izy, ny zon'ny fitsarana sy ny fitsarana amin'ny fanagadrana ara-dalàna, na amin'ny ankapobeny, ny fanaraha-maso ny fampiharana ny lalàna ataon'ny mpitsara. Ny fahaizana mampiato ny habeas corpus dia mifandraika amin'ny fametrahana ny lalàna miaramila.  Andininy 1, Fizarana faha-9 amin'ny lalàm-panorenan'ny Etazonia dia manambara fa, "Ny tombon-tsoa an'ny mpanoratra Wabe of Habeas Corpus dia tsy hatsahatra, raha tsy rehefa mitaky raharaha momba ny fikomiana na fanafihana dia mitaky izany ny fiarovana ny besinimaro." Betsaka ny tranga nampiasain'ny tafika tao amin'ny sisintanin'i Etazonia, toy ny nandritra ny Fikomiana Whisky sy ny tany atsimo nandritra ny Hetsika momba ny zon'ny olom-pirenena, saingy ireo hetsika ireo dia tsy mitovy amin'ny fanambaràna ny lalàna miaramila. Ny fanavahana dia tsy maintsy atao mazava tsara toy ny teo amin'ny lalàna miaramila sy ny fitsarana miaramila. Ny fametrahana miaramila dia tsy midika hoe tsy afaka miasa ny tribonaly sivily, izay iray amin'ireo lakileny, araka ny nomarihan'ny Fitsarana Tampony amerikana, momba ny lalàna miaramila.
Ao amin'ny lalàna amerikana, ny lalàna miaramila dia voafetra amin'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana maro izay napetraka teo anelanelan'ny ady an-trano amerikana sy ny ady lehibe II. Tamin'ny 1878, ny Kongresy dia nandany ny lalàna Posse Comitatus, izay mandrara ny fandraisan'anjaran'ny tafika amerikana amin'ny fampiharana lalàna anatiny nefa tsy nahazoana alalana tamin'ny kongresy.
Nandritra ny tantarany dia nandia ohatra marobe momba ny fametrahana lalàna miaramila i Etazonia, ankoatry ny nandritra ny ady an-trano amerikana.